Inkxaso yasimahla kwi-Intanethi yabaKhathaleli njengaweUkhathalelo luthatha iindlela ezininzi: kusapho, kubahlobo, okanye kubaxhasi, kwaye bambalwa kuthi abaziva belungiselelwe ngokwaneleyo. Sinokukunceda ufumane iimpendulo, ulwazi kunye nenkxaso ukuze ube nokuzithemba ngakumbi kwaye ungabi noxinzelelo oluninzi.
I-ExtendaTouch sesona sibonelelo siphambili soontanga senkonzo yasimahla ngokupheleleyo, nengaziwayo kwinkonzo yokhathalelo kwi-Intanethi. Siyawaxhasa amalungu ethu ngokukuvumela ukuba ukwazi ukunxibelelana ngasese malunga nemiba ethe ngqo kunye ne-ethe-ethe ngexesha elinzima lokwabelana ngezifundo esizifundileyo kunye nenkxaso.
Ngaphakathi kwisifundo ngasinye, iimenyu ezilahlayo zibonisa imibutho yesizwe kunye neyasekhaya engenzi nzuzo ekufutshane nendawo okuyo, ngenxa yoko akufuneki ukuba ukhangele uncedo xa ulifuna kakhulu. Kuya kufuneka usoloko unxibelelana nodokotela ofanelekileyo ngalo naliphi na icebiso elinikwayo.
Inethiwekhi yeTV yeHappingOut